Ikhaya » Izindaba Zamuva » Izindaba Ezintsha » I-USA Izindaba Ezintsha » I-CDC: Noma yimuphi umuthi wokugoma ovunyelwe yi-WHO KULUNGILE ukungena kwe-US
Airlines • Airport • zezindiza • Izindaba Ezintsha zaseYurophu • Izindaba Ezintsha • Izindaba Ezintsha Zokuhamba • Ukuhamba Ngebhizinisi • Health News • Industry Hospitality Industry • Amahhotela nezindawo zokungcebeleka • Izindaba • Abantu • Ukwakha kabusha • Unomthwalo wemfanelo • Ukuphepha • Ezokuvakasha • Transportation • Ukuvuselelwa Kwendawo Yokuhamba • Izindaba Zocingo Lokuhamba • ezithrendayo Manje • I-USA Izindaba Ezintsha
Ukugoma okwenziwe yi-Pfizer-BioNTech, Moderna noJohnson & Johnson njengamanje kuvunyelwe e-US - laba bobabili bokugcina basebenzisa izimo eziphuthumayo kuphela - kuyilapho i-WHO ixhase ama-jabs avela e-AstraZeneca / Oxford, Sinopharm naseSinovac ngaphezu kwalaba abathathu asebevele babizwa ngamagama .
Imithi yokugoma eyisithupha egunyazwe / evunyiwe yi-FDA noma efakwe kuhlu ukuze isetshenziswe ngabezimo eziphuthumayo yi-WHO izohlangabezana nemibandela yokuhambela e-US.
Ukuphawula kwe-CDC kuza emasontweni ambalwa ngemuva kokuba iWhite House ithe izosusa imikhawulo yokuhamba ngendiza emazweni angama-33.
ICDC iphinde yakuqinisekisa ukuthi yazise izindiza ezahlukahlukene ngohlu oluvunyiwe lwama-jabs e-COVID-19.
Okhulumela i-US Centers for Disease Control and Prevention (CDC) uthe noma yimuphi umuthi wokugoma we-COVID-19 ovunyelwe yi-World Health Organisation (WHO) uzovunyelwa izivakashi zakwamanye amazwe ezihambela e-United States.
"Imithi yokugoma eyisithupha egunyazwe / evunyiwe yi-FDA noma efakwe ohlwini ezosetshenziswa ngabezimo eziphuthumayo yi-WHO izohlangabezana nemibandela yokuhambela e-US," a CDC kusho okhulumela le nhlangano.
Imishanguzo eyenziwe ngu I-Pfizer-BioNTech, IModerna kanye noJohnson & Johnson njengamanje bavunyelwe e-US - laba bobabili bokugcina basebenzisa izimo eziphuthumayo kuphela - kuyilapho i-WHO ixhase ama-jabs avela e-AstraZeneca / Oxford, Sinopharm naseSinovac ngaphezu kwalaba abathathu asebevele babizwa ngamagama.
Ukuphawula kwe-CDC kuza emasontweni ambalwa ngemuva kokuthi iWhite House ithe izosusa imikhawulo yokuhamba ngendiza emazweni angama-33, aqale ukubekwa ukunqanda ukusabalala kwe-COVID-19, esikhathini esithile ngoNovemba. Kodwa-ke, ngaleso sikhathi, ayizange icacise ukuthi imiphi imigomo efanelekile.
Ngokuhamba kwesikhathi ngoLwesihlanu, iCDC iphinde yaqinisekisa ukuthi yazise izindiza ezahlukahlukene ngohlu olugunyaziwe lwama-jabs, yengeza ngokuthi i-ejensi yezempilo "izokhipha umhlahlandlela nolwazi olwengeziwe njengoba izidingo zokuhamba seziphothuliwe."
Umgwamanda omele abathwali bomoya abaningi, i-Airlines for America, usiqinisekisile leso simangalo, wathi "sijabule ngesinqumo se-CDC sokwamukela uhlu lwemigomo egunyaziwe yabahambi abangena e-US."
I-Amazon ithembisa amadili amahle ngempelasonto kaCyber ​​​​Monday
American, Spirit, Southwest Airlines: Kwenzekeni ku ...
I-China Eastern Airlines izosingatha i-2022 IATA AGM e ...
Umuthi Omusha Wokugomela I-COVID-19 Owenziwe E-China Wathola...
Uhlelo olusha lweLufthansa lwe-iThemba Cape Town lokusiza...
Duesseldorf HELAU! Iziwula ziphume ngobuningi ukuzobungaza impilo!
Izindiza zaseBelize zisuka eSeattle naseLos Angeles e-Alaska...
Ifilimu kaJames Bond Manje Ikhulisa Isidingo Sezokuvakasha E-Jamaica...
Okthoba 9, 2021 ku-19: 26
IComirnaty kuphela evunyelwe yi-FDA. IPfizer-BioNTech yi-EUA njengoba kunjalo ngeModerna neJ & J. Kubhalwe ngokusobala emibhalweni ye-FDA (i-Approval Letter, i-FAQ yeComirnaty (i-COVID-19 Vaccine mRNA) ne-Letter Of Authorization (Reissued) .Ngiye ezitolo ezimbili ezidayisa izidakamizwa futhi ngokusobala abakaze bezwe ngeComirnaty.